बालबालिकाको प्रशंसा गर्न चुक्नुभयो कि ! - Sabal Post
तपाईंले कहिल्यै बालमनोविज्ञानको बारेमा सोच्नुभएको छ ? उनीहरुको आनीबानी व्यवहारको विषयमा ध्यान दिनुभएको छ ? उनीहरुले गरेका गतिविधिबारे गहिरिएर सोच्नुभएको छ ? यदि छैन भने उनीहरुका क्रियाकलापबारे आजैदेखि ख्याल गर्ने बानी बसाल्नुहोस् । मनोविद्का अनुसार पाँच वर्षसम्म बालबालिकालाई आमाबुबाको न्यानो माया र साथ चाहिन्छ । तीन वर्षका बालबालिका जुनसुकै काम गर्न पनि अघि सर्छन् । चार वर्ष पुगेपछि आफ्नो सामानका लागि झगडा गर्न थाल्छन्् । पाँच वर्षको पुग्दा अरुलाई हेप्न र हेपिन थाल्छन् । उसको होडबाजी शुरु हुन्छ । साधारणतया गलत र सही के हो भन्नेबारेमा विचार गर्न थाल्छन् । यो बेलामा अरुको नक्कल गर्ने र ठूला मान्छेले जस्तै क्रियाकलाप गर्ने रुचाउँछन् ।
नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकमा बालबालिकाप्रति हुने सामाजिक व्यवहार सुधार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ । पछिल्लो एक अध्ययनले प्रारम्भिकरुपमा बाल विकासमा ध्यान नपुग्दा विकासोन्मुख मुलुकमा ४३ प्रतिशत बालबालिकाको जुन तहमा व्यक्तित्व विकास हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार विश्वमा १० देखि १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युको दोस्रो ठूलो कारण आत्महत्या हो । आत्महत्या कुनै न कुनै मानसिक विचलनले हुने गर्दछ । ‘‘बेलैमा बालविकासमा ध्यान नपुग्दा बालबालिकामा हुने मानसिक विचलन यसको मुख्य कारण हो’’, भन्नुहुन्छ मनोविद् डा ठगुन्ना ।
प्रारम्भिक बाल विकासविज्ञ डा दाहालले पुस्तक बालबालिकाको क्षमता विकासका लागि पुस्तक उपयोगी रहेको बताउनुहुन्छ । चित्र र विज्ञका लेख समावेश गरी बनाइएको पुस्तक हरेक बाल विकास केन्द्र र सहयोगी कार्यकर्ताका लागिसमेत उपयोगी छ । सेतो गुराँसले बालविकासका लागि आज काठमाडौँमा एक अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको थियो । – रासस
नेविसंघ खोज्दै राष्ट्रिय सभागृह
आफन्तको देवाली खान गएकी महिला मृत फेला
लकडाउनका ५४ दिनमा ५ सय भन्दा बढी…